स्वदेशी ब्राण्ड फाइब्रोको कथा ! – HamroKatha
फाइब्रोको आफ्नै सोरुम मात्र छ, फ्याक्ट्री छैन । यसो हुँदा पनि उत्पादन सम्भव हुने रहेछ । सुरज र उनका साथीहरूले केही फ्याक्ट्रीहरूमा गएर बुझ्दा उनीहरूलाई थाहा भयो कि; फ्याक्ट्री सेट अप गर्न खर्च धेरै लाग्ने रहेछ । अनि उनले बुझ्दै जाँदा थाहा पाएँ कि कयौँ फ्याक्ट्रीमा केही घण्टा उपकरण र सिलाई कर्मचारी खाली हुने रहेछन्। त्यही समयलाई सदुपयोग गर्दै उनीहरूले दैनिक २/३ घण्टा समय फ्याक्ट्री लिजमा लिएर काम गर्दै छन् ।
हाम्रो कथा २०७६ साउन ४ गते १६:२८
अहिलेको समय पानी पर्ने मौसम हो I तर पानी पर्‍यो भनेर घरमा मात्र बसेर पनि त भएन ! यदि हामीले लगाउने लुगाले नै पानी छेक्दिने भए कति आनन्द हुन्थ्यो ? यो चाहना तपाईँ हामी सबैको हो I यो कथा भने तपाईँ हाम्रो यही चाहनामा जन्मिएको उद्यम मा केन्द्रित छ I हेर्दा निकै कलिलो उमेरका यी युवा उद्यमी सुरज पाण्डे र लुबुना को सोचको प्रयास बाट जन्मिएक यो कथा !
एउटा कम्पनी लाई रन गराउन त्यस संस्थाको व्यवस्थापकीय पक्ष चुस्त बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ I यही कुरालाई मनन गर्दै सुरज पाण्डेले आफ्नो कलेज कि साथी लुबुना सँग व्यावसायिक हात बढाए र यी दुई व्यवसायीले फाइब्रो नामक कम्पनी सुरु गरे I जसले फाइबर अर्थात् फाइब्रो बाट निर्मित स्मार्ट क्याजोल पहिरन उपलब्ध गराउँछ I सुरज र लुबुनाले सुरु गरेको यस व्यवसायमा अर्को गज्जबको कुरा के छ भने यी व्यवसायीले केवल १० हजारबाट यो व्यवसाय सुरु गरेका हुन् I यति सानो लगानीबाट व्यवसाय सुरु गरे कि; जसले उनिहारुमा लगानी डुब्ला कि भन्ने कुनै डर भएन I
सुरज पाण्डे बताउँछन्, “१० हजार मध्य ५ हजार प्रोडक्सनमा खर्च भयो I एक वर्ष अघिको कुरा हो I हामीले कम्पनी सुरु गर्दा जाडोको मौसम थियो I सुरुको महिना ५२ पिस ज्याकेट उत्पादन गर्‍यौँ I एक महिनामै सबै ज्याकेट बिक्यो I यसले हामीलाई उत्प्रेरित गर्‍यो I त्यसपछि हामीले १०० पिस ज्याकेट उत्पादन गर्‍यौँ र कम्पनी अघि बढ्न थाल्यो I त्यसपछि ट्राउजर बनाउन थाल्यौँ I”
ज्याकेटको सोच बाट व्यवसायी क यात्रा थालेको सुरजको समूहले आफ्ना ग्राहकको माग र चाहना लाई मध्यनजर गर्दै हाल ज्याकेट मात्र नभएर अन्य उत्पादन समेत ग्राहक माझ पुर्‍याउन थालेका छन् I
गुणस्तर र मूल्यलाई मध्यनजर गर्दै, फाइब्रोले यसरी फाइबरका कपडा बजार मा उपलब्ध गराउने गरेको छ । ब्राण्डेड कपडाहरू गुणस्तरीय हुन्छन् तर महँगा हुन्छन् । सस्ता कपडा खोजे बजारमा जति पनि पाइन्छ । तर न लामो समय टिक्छन् न त आफैलाई चित्त बुझ्ने किसिमका हुन्छन् । यी दुई बिचको सन्तुलनलाई कायम गर्दै फ़ाइब्रोले गुणस्तर र मूल्य दुवै लाई ध्यान दिएको छ ।
फ़ाइब्रोको आफ्नै सोरुम मात्र छ, फ्याक्ट्री छैन । यसो हुँदा पनि उत्पादन सम्भव हुने रहेछ । सुरज र उनका साथीहरूले केही फ्याक्ट्रीहरूमा गएर बुझ्दा उनीहरूलाई थाहा भयो कि; फ्याक्ट्री सेट अप गर्न खर्च धेरै लाग्ने रहेछ । अनि उनले बुझ्दै जाँदा थाहा पाएँ कि कयौँ फ्याक्ट्रीमा केही घण्टा उपकरण र सिलाई कर्मचारी खाली हुने रहेछन्। त्यही समयलाई सदुपयोग गर्दै उनीहरूले दैनिक २/३ घण्टा समय फ्याक्ट्री लिजमा लिएर काम गर्दै छन् ।
इकमर्सलाई मुख्य प्लेटफर्म बनाएका उनीहरूले आफ्ना उत्पादनलाई मुख्य रूपमा अनलाइन मार्फत आफ्ना उत्पादन ग्राहक सम्म पुर्‍याउने गरेका छन् I फाइब्रोले आफ्ना उत्पादन ग्राहक सम्म पुर्याएर मात्र उनीहरूको काम भने सकिँदैन । सामान बिक्री भएपछि ग्राहकको विवरण डेटाबेसमा राख्ने गर्छ । केही हप्ता पछि ग्राहकलाई फोन गरेर – आफ्नो उत्पादनका विषय मा प्रतिक्रिया लिने गर्छ I यसरी उनीहरूले सुधारको अवसर पनि पाउने गरेका छन् I र यसरी ग्राहकहरू सँग लामो समय सम्बन्ध पनि बनाई राख्छन् ।
फाइब्रो मार्फत केवल सुरजको समूहको स्वदेशी उत्पादनले आन्तरिक बजारलाई सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा फाइब्रो त ब्रान्डका रूपमा स्थापित हुने नै छ I त्यसका साथै मुलुक समेत सम्बृदीको बाटोमा लम्किने छ I